Soomaalida Norway oo gurmad dhaqaale u sameyneyso abaaraha Soomaaliya. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Soomaalida Norway oo gurmad dhaqaale u sameyneyso abaaraha Soomaaliya.
Jaaliyada Soomaaliyeed ee Norway ayaa dhaqaale uruurin u sameyneyso abaaraha Soomaaliya, waxaana xiligan socdo abaabul iyo kulamo ay bulshada soomaaliyeed ee Norway uga tashaneyso qaabkii ay gurmad wadajir ah ugu sameyn lahaayeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee kunool Soomaaliya.
Previous articleDaawo NTV: Wararkii ugu danbeeyey ee xaalada corona ee Norway iyo xeerarka cusub ee dowlada.
Next articleReysulwasaaraha oo balanqaad u sameeyay dadka ku dhibaateysan bixinta biilka korontada.